I-China KN95 Dust Repirator Mask uMveliso kunye neFektri | VTECH
I-KN95 ekhuselweyo eyakhiwe nge-Mask-eyakhelwe ngaphakathi kwi-nose Inkcazo:
Inkcaza ekhuselekileyo yempumlo ye-KN95:
1. Hlamba izandla zakho ngaphambi kokunxiba imask, okanye ukunqande ukuchukumisa izandla zakho ngaphakathi kwimaski ngelixa unxibe imaski ukunciphisa amathuba okuba imaski ingcolisiwe.
2. Ukwahlula ngaphakathi, ngaphandle, phezulu kunye nezantsi kwemaski ngokucacileyo.
3. Musa ukungcungcuthekisa imaski ngesandla, imaski engu-955 inokulawula intsholongwane kuphela kwimaski. Ukuba ucofa imaski ngesandla, intsholongwane iya kumanzisa imaski ngamaconsi, ekulula ukubangela usuleleko lwentsholongwane.
4. Zama ukwenza imaski kunye nobuso bunamathele kakuhle. Indlela yovavanyo elula yile: emva kokubeka imask, kukhupha nzima, kwaye umoya awunakuvuza kumda wemaski.
5. Imaski yokukhusela kufuneka inxibelelane ngokusondeleyo nobuso bomsebenzisi. Umsebenzisi kufuneka achebe iindevu ukuze aqinisekise ukuba imaski inokusondela ngokusondeleyo ebusweni. Nantoni na phakathi kweentshebe kunye ne-pad seal kunye nobuso ziya kubangela imaski ukuba ivuze.
6. Emva kokuhlengahlengisa indawo yemaski ngokwendlela yobuso bakho, sebenzisa isalathiso somnwe wezandla zozibini ukuze ucinezele isiqwengana sempumlo ecaleni komda omphezulu wemaski ukwenza ulungelelwano ngokusondeleyo nobuso.
Edlulileyo: I-Mas95 yoKhuseleko loBuso
Okulandelayo: I-White Ear-loop eChazayo yokuKhuselwa kobuso be-3D